ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ“၁၀”မျိုး…
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ“၁၀”မျိုး… ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီး ဆက်နွယ်နေပါသေးတယ် …။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင် … (၁) သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ …
လောကဓံရိုက်ခတ်ခံနေရသူတွေအတွက် အကြံပေးစကား ပြောလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဟာဆိုရင် အသက်အရွယ်မျိုးစုံ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးရတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကို ကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းရှားရှားပါးပါးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အရွယ်မျိုးစုံ အားပေးတဲ့ စိုင်းစိုင်းကတော့ တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ် ပရိသတ် ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားအောင် လုပ်နိုင်သော အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဘာလုပ်လုပ် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံအားပေးရလောက်အောင် ပရိသတ်အမာခံတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ နှစ်တိုင်း ဧပြီ (၁၀) ရက်နေ့ဟာ စိုင်းစိုင်း မွေးနေ့ ဖြစ်ပြီး နှစ်တိုင်း သူ့မွေးနေ့ မှာကျင်းပလေ့ ရှိတဲ့စိုင်းစိုင်း Birthday Show ဟာလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိ ပရိသတ်များ ကွင်းလုံးပြည့်အားပေးကြမ်းတာ အမှန်ပါပဲနော်။အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲဆယ်လီမို့ တချို့ သော အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ Troll ခြင်းကိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးခံရတာတွေတော့ရှိပါတယ်အမျိုး သမီး …
သူ့ဘက်ကနေ သင့်အကြောင်းကိုပဲ တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အရာများ…
သူ့ဘက်ကနေ သင့်အကြောင်းကိုပဲ တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အရာများ… စိတ်ချင်းဆက်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြတယ်မလား။ စကားလုံးအဖြစ် ပြောပြမရပေမဲ့ စိတ်ထဲကနေ သိနေတာမျိုး၊ မမျှော်လင့် တစ်ခုတည်းကို တူတူလုပ်မိနေကြတာမျိုး၊ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ ရုတ်တရက် ဖြစ်သွားတဲ့ အပြုအမူ/ခံစားချက်မျိုး၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားပြောစရာမလိုပဲ နားလည်နေသလိုမျိုး၊ မျက်လုံးချင်းဆုံရုံနဲ့ သူ ဘာပြောလဲ ကိုယ်သိနေတာမျိုး ပေါ့ …။ ဒီလို အခြေအနေတွေကို ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါက စိတ်ချင်းဆက်တဲ့ သူတွေမှာပဲ ရှိတတ်သလို မသိစိတ်ကနေ သိတဲ့ အလိုအလျောက်အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် သင်သိနေသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်အကြောင်း တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ကို …
ဒီပုံပြင်လေး ဖတ်မိရင် ဖာသိဖာသာ မနေပါနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ
ဒီပုံပြင်လေး ဖတ်မိရင် ဖာသိဖာသာ မနေပါနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ တစ်ခါတုန်းက အမျိုးသားတစ်ဦး ရှိသတဲ့။ သူဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ မရခဲ့ပါ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မိဘတွေဟာ သူ့အတွက် မိန်းမတစ်ယောက် ရှာပြီးပေးစားလိုက်ပါတယ် …. ။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ မိဘတွေ ပေးစားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်ပြီးနောက် ထိုရွာလေးမှာပဲ ကျောင်းဆရာ အဖြစ် စာသင်ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ စာသင်ကြားရာမှာ အတွေ့အကြုံ မရှိသောကြောင့် တစ်ပတ်တောင် မခံပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သဘောထား မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရပါတယ် … ။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အိမ်ကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ …
“အောင်ရဲထွေးရဲ့ နောက်ဆုံးအနုပညာမှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာရီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး”
အောင်ရဲထွေးကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာထက်ကနေ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာလောကထဲမှာ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုပါဝင်ရိုက်ကူးရတဲ့ အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာလည်း ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။အောင်မြင်မှုတွေစတင်ရရှိလာချိန်မှာပဲ လူတစ်စုရဲ့ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်ကျော် ဇန်နဝါရီလ (၂)ရက်နေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ဒီသတင်းကြောင့် သူရဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ သူ့ရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ အတူအောင်ရဲထွေးကို ဒီနေ့အချိန်ထိ သတိရလွမ်းဆွတ်နေကြပါသေးတယ်။အောင်ရဲထွေးရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုတော့ အောင်ရဲထွေးရဲ့ နောက်ဆုံးအနုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ “ဒိုင်ယာရီ”လို့အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ မကြာမီပရိသတ်တွေ ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ အောင်ရဲထွေးရဲ့ အကိုဖြစ်သူက သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “အောင်ရဲထွေးဟာ သူအရမ်းကြိုးစားခဲ့သော ရုပ်ရှင်၊ သူသရုပ်ဆောင်ရတာ အားရခဲ့သောရုပ်ရှင်၊ သူ့ပရိသတ်များအတွက် သူအကောင်းဆုံးချပြခဲ့သောရုပ်ရှင်၊ သူ့အတွက် ဒီကားရဲ့နောက်မှာ၊ ထပ်ရှိမနေခဲ့သော …
“အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို ရွှေသမီးအတွက် ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး(၂)ကား”
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ရွှေသမီးကတော့ ကျရာဇာတ်ကောင်ကို အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “သခင်ကြီးနှင့်ငါးပိတို့စရာ” ၊ “ချည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရုံပြည့်ရုံလျှံအားပေးခြင်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၆၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို မင်းသမီးရွှေသမီးအတွက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေကလည်း ထင်ကြေးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး ရွှေသမီးကတော့ “သခင်ကြီးနှင့်ငါးပိတို့စရာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ စကားမပြောတတ်ပဲ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကို ဝါသနာပါလွန်းသူ ပိုပိုဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ စကားတအားပြောတတ်တဲ့သူအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကာရိုက်တာကို စကားတွေမပါပဲ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံပြီး “ချည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတော့ ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားသူကိုမှ ချစ်မိကာ မစွန့်လွှတ်နိုင်သူ ငုရွှေဝါသွယ်အဖြစ် ပရိသတ်တွေကို လူမှုဝတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေသမီးရဲ့ …
အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းကြတဲ့ O သွေးလေးတွေရဲ့ အကြောင်း…
အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းကြတဲ့ O သွေးလေးတွေရဲ့ အကြောင်း… အိုသွေး… အမတန် အစသန်တယ် …။ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ပျော်အောင် နေတက်တယ် …။ အသေးမွား ကိစ္စတွေကို ထုတ်မပြောဘူး ။ အမတန် နှုတ်လုံတယ် ဘယ်သူကိုမှ ကုန်းမတိုက်တက်သူတွေပါ …။ သူ စိတ်မပါရင် စကားတောင် မပြောဘူး တချို့သူတွေ ပြောတယ် လေကုန်မှာ စိုးလို့လား ဆိုပီး အဲလောက်ထိ တိတ်ဆိတ်နေတက်တာ ပြောပြီဆိုလည်း ပြောပါတယ် ဆိုတဲ့သူထက် ပိုပြောတယ် …။ လိုချင်တဲ့ အရာတခုခုကို မရရအောင် ယူတက်တယ် လိုချင်ပြီဆိုပေါ့ …။ လူတိုင်းနဲ့ ပြေလည်အောင် နေတတ်တယ် စိတ်ဓါက်ကတော့ မှန်လိုဘဲ …
Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူး…
Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူး… သင်တကယ်လို့ Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါ ဒါတွေမလုပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော် … (1) profile pic , cover pic တွေကို ခဏခဏ မပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး …။ (2) ကိုယ်စာမပြန်ချင်တဲ့ သူတွေဆို ဝင်သာဝင်ကြည့်ပြီး တိတ်တိတ်လေး ပြန်ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ် …။ (3) ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ post မျိုးဆို ဝင်ဆဲတာ ဝင်ပြောတာမျိုး မလုပ်ဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင် ကျော်သွားတတ်ကြပါတယ် …။ (4) မဟုတ်က ဟုတ်က လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း တိတ်တိတ်လေးဘဲ unfriend လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ Unfollow လုပ်လာတယ် …။ (5) …
“ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ဆိုရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးကင်း ဂါထာတော်”
“ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ဆိုရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးကင်း ဂါထာတော်” ယနေ့ခေတ်တွင် အတော် ကြောက်စရာကောင်းလာ၏ ။ ခရီးသွားချင် စိတ်တောင် တချို့နေရာတွေ မသွားမလာရဲ အောင် ဖြစ်မိ၏ …။ သတင်းတွေ ကလည် အန်ိဋ္ဌာ ရုံတွေကသာ များလာသည် ဟိုနေရာဖြင့် ကားတိုက်တာ ဆိုင်ကယ်မှောက် ဟိုနေရာဖြင့် ဓာက်လိုက် စသဖြင့်ပေါ့လေ မကြားချင်လှအဆုံးပါပဲ …။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် မိတ်ဆွေကြီးများကို နိုင်ငံခြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် အဝေးတစ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားလာ လှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်ဖြစ် အန္တာရာယ် ကင်း စေချင်သည် အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည် …။ လူတိုင်း အန္တာရာယ် ကင်းချင် ကြပါသည် …
အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရလာရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားပါ
အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရလာရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားပါ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ် …. ။ အရိုးပါး အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်လာရင် ကုသရ ခက်ခဲတာကြောင့် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပျိုမေတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်သင့်ပြီး မေမေတို့ကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလိုက်ပါနော် …. ။ (1) ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲမှာ ဆားပမာဏ များလွန်းတာက အရိုးဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပြီး အရိုးပါး အရိုးပွတာကို စောစောစီးစီး ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ် … ။ …
အိမ်ထောင်ရေးမှာ သားသမီးက ချည်တိုင် မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
ယောက်ျားအများစု ရှိန်ကြတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ
အရမ်းချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မဖြစ်မနေမေ့ပစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကို သတိရပါ….
အီဂျစ်သမ္မတဟောင်းမူဘာရက် (၉၁နှစ်) ကွယ်လွန်
နာမည်မှာ ” T ” ပါခဲ့ရင်…
Users Yesterday : 1909
This Month : 46593
This Year : 100676
Total Users : 395809
Views Today : 7991
Total views : 1427602